श्याम श्रेष्ठ काठमाडाैं, २४ चैत
काेरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी महामारीका कारण इतिहासमा पहिलो पटक मुलुक लकडाउनमा छ । कलकारखाना, उद्योग–व्यवसाय, विद्यालय, यातायात, होटल, घुमघाम सबै बन्द छन् ।
यति धेरै दिन लक्डाउनमा बस्न परेर सम्भावित आर्थिक नोक्सानीको हिसाबकिताब गर्दै द्रव्यप्रेमी केहीको मन धेरै अत्तालिएको होला; नाफाप्रेमी केहीको हृदय कुँडिएको होला । तर, धेरैको जीवन जोगाउनका निम्ति जे कुरा नगरी सुखै छैन, त्यसबाट हुने नोक्सानीको हिसाब किताब गरेर केही फाइदा छैन ।
यसो गर्नु भनेको ब्यर्थमा तनाव र चिन्तालाई आफ्नो मनभित्र भोज गर्नका लागि चुल्है निम्ता दिनु मात्र हो । मानव जीवनभन्दा पैसा ठूलो कुनै हिसाबले हुनै सक्दैन ।
तर, लकडाउनका उज्याला पाटाहरू पनि त्यत्तिकै देखापरेका छन्, जुन पहिले परिकल्पना गरिएको थिएन । यही लकडाउनले वर्षाैंदेखिसँगै बस्न नपाएका प्रियजनलाई सँगै बस्ने र रमाइलो गर्ने अमूल्य मौका प्रदान गरेको छ ।
सधैँ कुद्दाकुद्दा गम्भीर चिन्तन गर्ने फुर्सद नै नपाएकाहरूलाई यसले घोत्लिएर चिन्तन मनन गर्ने र आत्मसमीक्षा गर्ने अपूर्व अवसर दिएको छ । धेरैलाई यसले आफ्नो नटुंगिएको घरायसी काम मजाले टुंग्याउने समयसमेत प्रदान गरेको छ ।
धेरै दशकपछि चैत महिनामा पनि हिमालयहरू सफा र चहकिला देखिएका छन् । वातावरणमा धुलोधूवाँ निकै घट्नाले शहरबजारका सारा मानिसलाई सास फेर्न धेरै सहज भएको छ । यस्तो सधैँभरि भइदिए क्या खासा हुन्थ्यो भन्ने सर्वसाधारण नागरिक, वृद्धवृद्धा र दमखोकीका रोगीहरू थोरै छैनन् ।
कोरोना महामारी चीनमा चर्किनेबित्तिकै बाहिरी देशका मानिसलाई नेपाल छिर्न बन्द गर्ने र नेपालीका निम्ति नेपालको सबै सीमानाका र विमानस्थलमा हामीले कडाइपूर्वक कोरोना परीक्षणको प्रबन्ध र संक्रमितको सम्पर्कको इतिहासको मिहीन खोजबिन र बृहत् परीक्षण गर्न सकेको भए अहिले देशमा लकडाउन नै गर्नु पर्दैनथ्यो भन्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू नेपालमा धेरै छन् ।
यो तर्कलाई नाजायज भन्न मिल्दैन किनभने दक्षिण कोरियाले त्यही उपाय अपनाएर लकडाउनको उपायमा नगएर पनि कोरोनाको सफल नियन्त्रण गरिरहेका छन् ।
त्यहाँ संक्रमित र संक्रमणको सन्देह गरिएका ब्यक्तिहरूका क्लस्ट मात्र अस्पताल/क्वारेण्टाइन वा आइसाेलेसन केन्द्रमा लकडाउनमा छन् । बाँकी जनता आआफ्नो गतिविधि जारी राख्नका लागि खुला छन् ।
विश्वमा सबैभन्दा ज्यादा घनाबस्ती र वृद्धहरूको सबैभन्दा घना जनसंख्या भएको देश जापानमा कोरोना भाइरसको महामारी अमेरिका र इटालीमा झैँ सल्केको भए यो विश्वकै सबैभन्दा भयावह महामारी हुनसक्थ्यो । तर, त्यही जापानमा त अझ परीक्षणमा पनि खासै जोड दिइएन । त्यहाँ दक्षिण कोरियाको तुलनामा २० गुणा कम मात्र परीक्षण गरियो ।
परीक्षण त्यहाँ तिनीहरूको मात्र गरियो जो कोरोनाभाइरसका कारण गम्भीर रूपले बिरामी थिए । दिनमा कुल ६ हजारवटा टेस्ट गर्ने क्षमता रहे तापनि मार्च २५ सम्ममा जम्माजम्मी १४ हजार स्वाबको मात्र जापानमा परीक्षण गरियो ।
जापानमा संक्रमणको लक्षण देखिएका मानिसहरूलाई क्लस्टरमा राखेर आइसाेलेसनमा उपचार गर्नमा जोड दिइयो । त्यस्ता जम्मा १२ वटा जति क्लस्टर बने जापानमा । जापानले भाइरसको उपचारका लागि विकास गरेको ओखती फेभिपिराभीर कोरोना भाइरसको उपचारका लागि पनि निकै प्रभावकारी सावित भएको पाइयो ।
परन्तु कोरोनामाथि विजय हासिल गर्नका लागि जापानमा मुख्य जोड सामाजिक दूरी, फेस मास्क र हातलाई साबुनपानीबाट वा स्यानिटाइजरबाट सफा पार्नमा दिइयो ।
जापानको आफ्नै पुरानो संस्कृति–हात नमिलाउने तर एकले अर्कोलाई झुक्ने, लगातार हात धुने/दिनमा धेरै पटक नुहाउने, घाँटीमा संक्रमण हुन नदिनका लागि नुनपानी वा ओखतीले कुल्ला गर्ने र मास्क लगाउने गरेर जापानमा संक्रमण फैलन नदिन तथा संक्रमणको दर न्यून बनाउन चामत्कारिक उपायको रूपमा काम गर्‍यो ।
महामारी अरु देशमा सल्केको देख्नासाथ जापान सरकारले आफ्नै पुरानै संस्कृतिलाई जोडले सर्वव्यापी रूपमा प्रयोगमा ल्याउन आह्वान गर्‍यो । अरु देशले संक्रमित पत्ता लाउन र उपचार गर्नमा मुख्य जोड दिए, जापानले संक्रमण मानिससम्म पुग्नै नदिने प्रतिरोधात्मक उपायमा जोड दियो ।
निश्चय पनि जापानमा पनि विद्यालयहरू बन्द गरिए । सबै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू रद्द गरिए । गृष्मकालीन ओलम्पिकसमेत रद्द गरियो । रोग फैलिएका मुलुकबाट जापानमा आउन विदेशीहरूलाई प्रतिबन्ध गरियो । तर, पसलहरू थुनिएनन् । रेस्टुराँहरू खुलै रहे । देशलाई लकडाउन गरिएन ।
यही उपाय अपनाएकाले जापान र दक्षिण कोरियाको मृत्यु दर पनि अन्य मुलुकको भन्दा ज्यादै थोरै छ । जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको मार्च ५ को पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार जापानमा ३,३३९ लाई कोरोना संक्रमण हुँदा त्यसबाट मृत्यु हुनेको दर जम्मा ७७ मात्र छ ।
यसको मतलब संक्रमणको सापेक्षतामा त्यहाँको औसत मृत्यु दर २.३ प्रतिशत मात्र छ । दक्षिण कोरियाको मृत्युदर त अझ त्योभन्दा थोरै छ । त्यहाँ कोरोना संक्रमितको कुल संख्या १०,२३७ हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या १८३ मात्र छ । यो भनेको कुल संक्रमितको तुलनामा औसत १.८ प्रतिशतको मृत्यु दर हो जब कि अहिले विश्वको सरदर मृत्युदर ५.४ प्रतिशत छ ।
जापान र दक्षिण कोरियालाई झैँ नेपाललाई पनि यसो गर्ने समय र अवसर थियो तर त्यो समय र अवसर हामीले गुमायौँ । हामीले समय र अवसर रहुञ्जेल लामो समय खाली ज्वरो छ कि छैन मात्र हेरेर हाम्रो सीमा र विमानस्थल खुला छोडिदियौँ । संक्रमितहरू सम्भवतः अहिले हाम्रो बस्ती भित्रभित्रसम्म पसिसके । कतै त्यो इटालीमा झैँ एक्कासि ठूलो संख्यामा बाहिर सम्हालिनसक्नुको समस्या भएर प्रकट हुने त होइन ?
यस्तो स्थितिमा एकातिर जापानमा जस्तो संक्रमण मानिससम्म पुग्नै नदिनका लागि प्रतिरोधात्मक प्रशिक्षण अर्कोतिर लकडाउन्, सम्पर्क ट्रेसिङ र बृहत् परीक्षण यी दुई थरी उपायलाई साथसाथै अपनाउनु सिबाय हाम्रा लागि अर्काे सर्बोत्तम उपाय कुनै छैन ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा अहिले कोरोना भाइरसले हाहाकार मच्चाएको छ । विश्वमा सबैभन्दा ज्यादा कोरोना संक्रमित अमेरिकामा नै छन् । तर, अमेरिकाको नाकैमुनि त्यसको पारिपट्टि रहेको सानो देश क्युबाले आफ्नो मुलुकमा बृहत् परीक्षणको माध्यमबाट कोरोना भाइरसको फैलावटलाई प्रशंसनीय ढंगले रोकिरहेकाे छ ।
त्यहाँ देशभित्र लकडाउन गरिएको छैन तर कोरोनाको फैलावट पनि नाम मात्रको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ २६९ जना कोरोना संक्रमित छन् र मृत्यु हुनेको संख्या ६ मात्रै छ ।
यसका लागि क्युबाले अपनाएको विधि सरल तर निकै प्रभावकारी मानिएका छ । उसले अहिले हवाईजहाज, जहाज र त्यसबाट आउने विदेशी नागरिकलाई प्रवेश निषेध गरेको छ । तर, सबै क्युबालीलाई भने प्रवेश खुला छ ।
तथापि क्युबालीहरूको पनि परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भने अनिवार्य गरिएको छ । क्युबाको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तगर्तको इपिडेमियाेलोजीका निर्देशक फ्रान्सिस्को ड्युरानले बताएका छन् कि आईपीकेकाे अगुवाइमा देशको प्रवेश विन्दुमा र अन्य केही स्थानमा दक्ष जनशक्तिसहितको अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला छन् ।
क्युबासित अहिले ४० हजार रियल टाइम टेस्ट छन् जसले मोलिक्युलको तहमा डाइग्नोसिस गर्न सक्छ । साथै, आधा घण्टामा परिणाम दिन सक्ने १ लाखवटा टेस्टिङ किटको बन्दोबस्त पनि गरिएको छ ।
यी सबैका कारण क्युबामा कुनै पनि ब्यक्ति कोरोनाको परीक्षणबाट छुट्दैन । त्यहाँ लकडाउन पनि गर्नुपरेको छैन, र कोरोनाको संक्रमण पनि नियन्त्रित अवस्थामै छ । नेपालमा जस्तो सीमा र एयरपोर्टबाट अनियन्त्रित रूपमा बस्तीमा संक्रमित व्यक्ति छिर्ने सबै सम्भावनालाई त्यहाँ सुरुदेखि नै समाप्त पारिएको छ ।
यति मात्र होइन, सानो मुलुक क्युबाले आफ्नै प्रविधिबाट कोरोनाभाइरसको उपचारका लागि प्रभावकारी औषधि पनि टुंगो लगाएको छ जसलाई उसले ‘इन्टर्फेरोन अल्फा २ बी’को नाम दिएको छ । यो क्युबाले पहिल्यै विकास गरेको भाइरसको ओखती हो, जो कोरोना भाइरसमा पनि प्रभावकारी सिद्ध भएको छ ।
चीनमा भएको कोरोना संक्रमणको उपचारमा यो ओखतीलाई परीक्षण गरिएको थियो र एउटा जापानी ओखतीका साथसाथै यो पनि अचुक सावित भएको थियो ।
चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र क्युबाको अनुभवले देखाएको छ कि कोरोना भाइरस दोस्रो विश्वयुद्धयता मानवजातिले भोगेको सबैभन्दा ठूलो संकट हो, तथापि यो विजय प्राप्त गर्न नसकिने चुनौती होइन ।
चीनमा ठूलो नोक्सानीपछि दुई अढाइ महिनामै यसमाथि विजय प्राप्त गरियो । जापान, दक्षिण कोरिया र क्युबामा विनालकडाउन थोरै नोक्सानीमै यसमाथि विजय प्राप्त गर्ने प्रयास गरिँदै छ ।
चीनमा लकडाउन र ब्यापक नमुना परीक्षण/कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकाे उपाय एकसाथ अपनाइयो । नेपालले अहिले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा मूलतः चीनकै उपाय अवलम्न गर्न खोज्दै छ । परन्तु हाम्रो कमजोरी केमा देखिँदै छ भने हाम्रो संक्रमितको परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चीनमा जस्तो व्यापक र सूक्ष्म हुन सकेको छैन ।
ट्रेसिङको निर्णय कागतमा ठीकै छ, तर व्यवहारमा यो त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । प्रतिरोधात्मक शिक्षाका व्यापकता तथा संक्रमितको परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी ढंगले नहुने हो भने जति लामो लकडाउन गरे पनि कोरोना भाइरसमाथि विजय सम्भव हुँदैन ।
इटालीको ताजा अनुभवले यही देखाएको छ । त्यहाँ अस्पतालमा जो स्वयम् आए तिनको मात्र नमुना परीक्षण गरियो । संक्रमित र उसको सम्पर्कमा आएका मानिसलाई सरकारले खोजीखोजी नमुना परीक्षण गरेन ।
लकडाउनकै पनि इटालीका जनताले राम्रो पालना गरेनन् । त्यसैले संक्रमण भित्रभित्रै निकै धेरै फैलियो र कोरोना भाइरसले संसारमा सबैभन्दा ज्यादा मानिस त्यहीँ मरे । यो भुल नेपालमा हामीले गर्नु हुँदैन । एउटै केसमा उही भुल हामी दोहाेर्‍याएर गछौँ भने त्यसको नतिजा मात्र भिन्न कहिल्यै निक्लन सक्दैन ।
नेपालको लकडाउनमा अर्को कमजोरी के देखिएको छ भने नेपाल सरकारले समयमै यसको सामाजिक न्याय र मानवीय पक्षमा कुनै ध्यान दिएन । अर्थात्, लकडाउन भएपछि आजको आजै कमाएर खानुपर्ने कति लाख मान्छे भोकै पर्लान् ? कति मान्छे खानै नपाएर मर्लान् ? कतिको अकल्पनीय बिल्लीबाठ होला ? सरकारले बेलैमा त्यसको हेक्का राखेन, हिसाब किताब गरेन ।
भारतमा श्रमिकको रूपमा काम गरेर भारत पनि लकडाउन भएपछि नेपाली सीमामा आइपुगेका सयौँ गरिब र श्रमिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिने तर क्वारेन्टाइन/आइसाेलेसनमा राख्नेजस्तो सवालमा समेत नेपाल सरकार लचिलो बनेन । यसबाट नेपाल राष्ट्रकै सन्तान ती श्रमिकहरू मातृभूमि र अभिभावकबिनाका हुन गएका छन् ।
नेपाल श्रमिककाे बाहुल्य रहेकाे देश हो । २८ प्रतिशत मानिसहरू यहाँ बहुआयामिक गरिबीमा छन् भने १८ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । यस्तो स्थितिमा कोरोनाले केही सय मानिस प्रत्येक दिन नमरुन् भनेर हामीले लकडाउन गरिरहँदा प्रतिदिन केही हजार मान्छे भोकले मरे भने त्योभन्दा ठूलो विडम्बना अरु केही हुने छैन ।
त्यसैले, लकडाउनको घोषणा गरिरहँदा आजै काम गरेर आजै खानुपर्ने र बेरोजगार हुन जानाले भोकै पर्न जाने लाखौँ श्रमिक, गरिब तथा असहायका लागि सरकारले अविलम्ब र मूर्त सहयोग प्याकेज तथा लकडाउनभरि खाना ख्वाउने विकल्प प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
यो काम स्थानीय सरकारले गरोस् भनेर मात्र पुग्दैन, स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारले स्रोतसाधन पनि अविलम्ब विनियोजित गरिदिनुपर्ने हुन्छ । भारतको राजधानी दिल्लीमा गैरकम्युनिस्ट केजरीवाल सरकारले समेत गर्न सकेको यो काम नेपालमा वामपन्थी सरकारले के कारणले गर्न नसकेको होला ? नेपालको सीमानाकामा आइपुगेका श्रमिकलाई त नेपालभित्र तुरुन्त प्रवेश दिएर उनीहरूलाई स्थितिबमोजिम क्वारेण्टाइन वा आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रत्येक ठूलो संकट आफ्नो नेतृत्व सक्षम रहेको सावित गर्ने ज्यादै ठूलो अवसर पनि हो । अहिले त्यो विशाल अवसर नेकपा र यो सरकारलाई छ । के नेकपा र यो सरकारले विगत २ वर्षको अलोकप्रियता र बेठीक/अस्वच्छ कामका फोहोरी दागहरूलाई धोइपखाली गरेर फेरि आफ्नो सक्षमता व्यवहारमा सावित गर्न सक्छ ? हालै भएका स्वास्थ्यसम्बन्धी केही जरुरी सामानको खरिद प्रकरणमा देखिएको सम्भावित घोटालाले त्यो अवसरमा पुनः ग्रहण लगाउन थालेको छ । त्यसमाथि निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीमाथि सजाय गर्न सकेमा अवसर बितिहालेको भने अझै छैन ।
अहिले कोरोनाको महामारीका कारणले निकै राम्रो के हुँदै छ भने सबै प्रदेशमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला बनिरहेका छन् । कतिपयमा त बनेर पनि कार्यान्वयमा आइसके । देशभरि नै क्वारेण्टाइन र आइसाेलेसन केन्द्र बन्दै छन् । जस्तोसुकै महामारी पनि सामना गर्ने भौतिक पूर्वाधार देशभित्रै तैयार हुँदै छ ।
सरकारको लकडाउनको घोषणालाई बढीजसो जनताले खुरुखुरु पालना गर्दै छन् । आमनागरिकमा भाइरसबाट हुने महामारी सामना गर्नका लागि अभूतपूर्व जनचेतना जाग्दै छ । सबै दल महामारीविरुद्ध लड्न एकतावद्ध देखिएका छन । राज्य र नागरिकको एकता पनि नाकाबन्दीको समयमाझैँ अभूतपूर्व रूपमा देखा पर्दै छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २४, २०७६, १४:२४:००